भागरथी हत्या प्रकरण : शव पोष्टमार्टम गरियो, शंकास्पदमाथि प्रहरीको सोधपुछ : RajdhaniDaily.com sharethis
धनगढी । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका ७ चडेपानीकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको शवको पोष्टमार्टम गरिएको छ । बिहीबार साँझ मृत फेला परेकी भट्टको शनिबार पोष्टमार्टम गरिएको हो । भट्टको शव शुक्रबार बेलुका जिल्ला अस्पताल पुर्याइएको थियो । पोष्टमार्टमको रिपोट आउन भने बाँकी रहेको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा. बसन्तराज जोशीले बताए ।
पोष्टमार्टम रिपोटपछि भागरथी हत्या प्रकरणको विषयमा थप जानकारी प्राप्त हुनेछ । किशोरीको बलात्कार पछि हत्या गरिएको स्थानीयको भनाई छ । किशोरीको शवको प्रकृति हेर्दा बलात्कार पछि हत्या गरेको मृतकका आफन्त शिवराज भट्टले बताए ।
के गर्दैछ प्रहरी ?
बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका ७ की १७ बर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको हत्या भएको तीन दिन बितिसक्दा समेत त्यसमा संलग्नको पहिचान हुन सकेको छैन । घटनाको अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जनकराज पाण्डे नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यस्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले समेत घटनाको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले हामीले शंकास्पद व्यक्तिलाई सोधपुछ गरिरहेका छौं । हाम्रो प्राविधिक टोली अनुसन्धानमै खटिएको छ । हत्यामा संलग्नलाई कानुनी कारवाही गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ ।’
भागरथीको हत्या नै भएको प्रहरीले प्रारिम्भक अनुसन्धानबाट अनुमान गरेपनि हत्याको कारण भने खुल्न नसकेको जनाएको छ । ‘हामीले किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको हो वा अन्य कुनै कारणले हो भन्ने बिषय निष्कर्षमा पुगिसकेको छैनौं । पोष्टमार्टम रिपोटपछि त्यो कुरा थाहा हुन्छ । ‘डेथ अफ कज’ का विषयमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’प्रहरी नायव उपरीक्षक अधिकारीले भने, ‘हामी यो घटनाका अभियुक्तलाई पत्ता लगाएर छोड्छौं ।’
शोकमा डुब्यो चडेपानीगाउँ
आफ्नो गाउँकी किशोरी शंकास्पद मृत्यु पछि चडेपानी गाउँ शोकमा डुबेको छ । गाउँकी १७ बर्षीया किशोरीको हत्या भएपछि गाउँ शोकमग्न भएको छ । स्थानीय सनातन धर्म मावि श्रीकोटमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत भागरथी भट्टको घर नजिकैको लवलेक सामुदायिक वनमा हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेपछि गाउँ नै शोकमग्न भएको स्थानीय शंकरदत्त भट्टले बताए । उनले भने, ‘यस्तो घटना अहिलेसम्म भएको थिएन् । अप्रत्यासित घटना पछि गाउँ पुरै त्रसित बनेको छ ।’
गाउँकी छोरीको हत्या भएपछि गाउँलेहरु अहिले शोकमग्न भएका मृतकका काका शिवराज भट्टले बताए । छोरीहरुलाई विद्यालय पठाउन समेत मुस्कील भएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सनातन धर्म मावि श्रीकोटमा हिँडेर ४५ मिनेट जतिमा पुगिन्छ । बीचमा जंगल पर्छ । यो घटनापछि छोरीहरुलाई स्कुल कसरी पठाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।’
मृतक किशोरीको घरमा आमा र छोरी मात्रै रहेका थिए । मृतक किशोरीका बुवाको दुई महिना अघिमात्रै मृत्यु भएको थियो । मृतकका दाजु रोजगारीको सिलसिलामा भारतको दिल्लीमा रहेका छन् । काखको छोरी गुमाउँदा मृतककी आमा द्रोपती भट्टका आँखा ओभाएका छन् । श्रीमान बितेको पीडामै रहेका द्रोपतीलाई सन्तान गुमाउँदाको पीडाले झने थिचेको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै प्रदर्शन
भट्टको हत्याको विरोधमा दुई दिनदेखि बैतडीमा स्थानीय र विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । भागरथीका हत्यारालाई पत्ता लगाई कडा कानुनी कारवाहीको माग गर्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीहरुले शुक्रबार र शनिबार दिनभरी खोचेलेक, सिल्लेगडाक लगायतका ठाउँमा सडकमा चक्काजाम गरेका थिए । भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएकाले हत्यारा पत्ता लगाई दोषीमाथि कारवाही गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आफूहरुले आन्दोलन शुरु गरेको स्थानीय युवा भुवन कार्कीले बताए ।
दिनदहाडै किशोरीमाथि बलात्कार गरी हत्या गरिएकाले आफूहरुले आन्दोलन थालेको उनले बताए । उनले भने, ‘दोषी पत्ता नलगाउँदा सम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ । दोषीमाथि कडा कानुनी कारवाही हुनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’ प्रदर्शनकारीहरुले प्लेकार्डमा भागरथी फोटो राख्दै न्यायको माग गरेका छन् । आन्दोलनकारीहरुले भागरथी भट्टलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै आज (आइतबार) देखि तीन दिने शैक्षिक हड्ताल समेत घोषणा गरेका छन् ।
पद्मश्री साहित्य पुरस्कारका लागि १५ पुस्तक
ओर्गिन थिङ्ले दोर्जेको ३८औं जन्मोत्सव मनाइयो
हाँसो बोकेर आयो घनचक्कर
उपभोक्ता अधिकार र व्यावहारिकता
एमालेमा चर्किंदै विवाद
चीनमा महिला हिँसा : पहिला महिलालाई छाेए अनि निर्घात कुटे
आफ्नै विद्यार्थीलाई याैन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षक पक्राउ
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – मंसिर २३
बा हत्या अभियोगमा कान्छा छोरा पक्राउ